Xa ukwicandelo lokukhanyisa umhlaba njengomenzi, umyili wezibane, umhambisi, okanye umyili wezinto ezicacisiweyo, kuyakufuneka ubhekise kwiifayile zesicwangciso seefoto yokuqonda imveliso yokukhanya kunye namandla e-lumen kulungiso onqwenela ukulifaka Uyilo. Ye ...
Ixesha ledijithali ibe yinyani yokwenyani kwihlabathi leentengiso. Ukuvela korhwebo lwe-elektroniki kufuna ukuba kutshintshwe indlela kuyilo lwezicwangciso zorhwebo. Kule nyaniso intsha, yeyiphi indima edlalwa ziivenkile ezibonakalayo? Iindawo zentengiso zemveli zijamelene nomceli mngeni ongazange ubonwe ngaphambili: ...
Kule mihla, isixeko yeyona ndawo iphambili apho ubomi babantu buqhubeka khona. Ukuba sithathela ingqalelo ukuba uninzi lwabemi behlabathi bahlala kumaziko asezidolophini kwaye le meko inyuka kuphela, kubonakala kufanelekile ukuhlalutya indlela ezi ziguqulwe ngayo ezi ndawo kwaye yeyiphi imiceli mngeni abajamelana nayo ...